Huawei Mate 20X 5G wuxuu helayaa beta xiran ee EMUI 10 oo leh Android 10 | Androidsis
Huawei Mate 20X 5G horeyba waxay u heshay beta xiran ee EMUI 10 oo ku saleysan Android 10
Qaybta taleefannada gacanta ee casriga ahi waa mid ka mid ah kuwa ugu yar warshadaha moobiilka, laakiin sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa sida ugu dhakhsaha badan u koraya, waana sababta oo ah shirkado kala duwan ayaa ku darsanaya moodallo badan oo loogu talo galay ciyaaraha kolba waqtiga ka dambeeya. Horeba maanta waxaa jira fursado dhowr ah oo aan ku haysano suuqa, iyo Mate 20X waa hal tusaale oo ay Huawei miiska u soo saarayso.
Terminalkani wuxuu leeyahay noockiisa 5G. Tani, sida ku cad shaashadda rasmiga ah ee shirkadda Shiinaha ay dhowaan daabacday, waxaad heleysaa nooca ugu dambeeya ee EMUI, oo ah lambar 10, oo ka hooseeya Android 10, in kasta oo aan qaabkeedu degganayn.
Su'aasha, Huawei Mate 20X 5G wuxuu mudan yahay beta xiran ee EMUI 10 oo hoos imanaya Android 10. Waqtigaan la joogo, isticmaaleyaasha kaliya ee arrintan ku hanan kara waa Shiinaha. Caalamiyan, wali waa inaan sugnaa, labadaba midkaan iyo cusbooneysiinta xasilloon.
Huawei Mate 20X 5G waxay heleysaa EMUI 10 oo leh Android 10 oo ah qaab beta xiran
Haddii aad u isticmaaleyso Mate 20X 5G qalab maalinle ah oo isdaba-joog ah, waxaan kugula talineynaa inaadan rakibin nooca beta ee EMUI 10 oo leh Android 10. Tani waxay la cuni lahayd cilado badan iyo dhibaatooyin caqabad ku noqon kara qaar ka mid ah howlaha muhiimka ah iyo astaamaha casriga ah.; la soco in tani ay tahay xirmo qalabka firmware ka ah. Intaa waxaa sii dheer, Huawei wuxuu xusayaa in barnaamijyada qaarkood laga yaabo inaan wali lagu hagaajin Android 10.
Isticmaalayaasha xiisaha leh ee Shiinaha ee raba inay iska diiwaangeliyaan barnaamijka waxay ku samayn karaan barnaamijka Naadiga Huawei> Madasha> Qaybta Qaybta> Dhammaan Qaybaha> Aagga EMUI> Cusbooneysiinta Korsashada Hore. Kahor soo degsashada iyo rakibida, ku xir taleefankaaga shabakad Wi-Fi ah, si looga fogaado isticmaalka xad-dhaafka ah ee aan loo baahnayn ee baakadka xogta, kuna hayso heer batteri oo wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Huawei Mate 20X 5G horeyba waxay u heshay beta xiran ee EMUI 10 oo ku saleysan Android 10
Laakiin fadlan ma noo sheegi kartaa goorta la cusbooneysiinayo Huawei mate 20 X 5G ilaa emui 10 mahadsanid
Ku jawaab Vicente
Galaxy Note 10 wuxuu caawiyaa hagaajinta natiijooyinka Samsung
Kaaliyaha Google wuxuu tijaabiyaa isbeddelka isbeddelka